डा. धनरत्न शाक्य - कान्तिपुर समाचार
बिहानै कुनै गीत वा धुन सुने लामो समय त्यही मनमा आइरहन्छ । थाहै नपाइकन गुनगुनाइन्छ । पार्टी वा समारोहमा ठूलो आवाजमा गीत घन्किरहेको हुन्छ । सवारी साधनमा शृंखलाबद्ध बजिरहेका हुन्छन् । तपाईंले सुनिरहने, गुनगुनाइरहने गीतले पार्ने मनोसामाजिक प्रभावलाई कहिल्यै केलाउनुभएको छ ?
मनोरोगका मननीय तथ्य
माजमा मानसिक समस्यालाई लिएर भ्रामक, हानिकारक र नकारात्मक सोच र धारणा व्याप्त छन्। मानसिक भनेपछि जुनसुकै रोगलाई पनि उस्तै आँखाले हेर्ने चलन छ। मानसिक समस्यालाई रहस्यमय, सन्त्रासपूर्ण वा नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिन्छ।
स्वस्थ मनस्थितिको मानिस सन्तुलित रूपमा सोच्न, अनुभव र व्यवहार गर्न सक्ने हुन्छ । सुनियोजित र परिलक्षित भएर मेहनत गरी जीवन बिताउँछ । फुर्सदको समय पनि सदुपयोग गर्छ । समाज, छरछिमेक र नातागोतामा परस्पर चालचलन, संस्कृति र समय सुहाउँदो रूपमा मिलनसार भएर बस्न सक्छ ।
मनमस्तिष्कका काम गराइमा असर पार्ने कुनै पनि चिज वा रसायनलाई मादक, नशालु वा लागूपदार्थ भनिन्छ।
डा. धनरत्न शाक्यका लेखहरु :
सुर्तीजन्य पदार्थका असर
लत लगाउने पदार्थहरूमा साह्रै बानी पर्ने तर अक्सर बिर्सिने नशालु चिज हो, निकोटिन। निकोटिनयुक्त पदार्थमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, कक्कड, सुल्पाजस्ता धूवाँ तान्ने र सुर्ती, जर्दा, पान, मसला, नस, गुट्खाजस्ता धूवाँरहित हिसाबले सेवन गर्ने चिज पर्छन्।
डिप्रेसनबाट जोगिन सतर्कता
परिस्थितिवश उदास, दु:खी वा दिक्दार अनुभव हुनु सामान्य हो । तर यसरी उदास अनुभव हुनु उदासीन मनोरोग वा डिप्रेसनको लक्षण पनि हुनसक्छ । मानिसले उदास अनुभवलाई रोगको अंश हो कि जीवन र जगतको प्रतिकूल परिस्थितिप्रतिको स्वाभाविक प्रतिक्रियामात्र हो भनेरे छुटयाउन नसक्दा रोग पहिचान र उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गर्छ ।
डिप्रेसन : यो सालको विषय
विश्व स्वास्थ्य संघको आव्हानमा सन् १९५० देखि विविध विषय र सरोकारमा अप्रिल ७ को दिनमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउन थालिएको हो । हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय रुपमा कुनै खास विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण र कार्यान्वयनको लागि यस दिवसमा खासगरी विविध कार्यक्रमहरु आयोजना हुने परम्परा रहेको छ ।